Semalt इस्लामाबाद विशेषज्ञ: SEO के हो र एक SEO विशेषज्ञ को हो?
यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइट अनुकूलित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एक एसईओ विशेषज्ञको आवश्यक पर्दछ। जे होस्, तपाईले प्रक्रिया सुरू गर्नु अघि, तपाईले के गर्न लाग्नु भएको छ बुझ्नु पर्छ। त्यसोभए SEO के हो? एसईओ ( खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन) बिभिन्न युक्तिहरूको प्रयोग हो जस्तै किवर्ड र कुञ्जी शब्द शीर्षक जुन वेबसाइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ र प्रयोगकर्ताहरूलाई खोजी ईन्जिनमा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तपाइँसँग एक राम्रो अनुकूलित साइटको लागि, तपाइँलाई एसईओ विशेषज्ञको आवश्यक छ जसले SEO युक्तिहरू बुझ्दछन्। विशेषज्ञको काम भनेको अनलाईनमा राम्ररी अनुसन्धान गर्नु, पहिचान गर्नु र विभिन्न युक्तिहरू लागू गर्नु हो जसले खोज परिणामहरूलाई सुधार गर्दछ।
माइकल ब्राउन, Semalt को एक विशेषज्ञ विशेषज्ञ, यहाँ यस सम्बन्धमा केहि व्यावहारिक सल्लाहहरु परिभाषित गर्दछ।
तपाइँ कसरी एक राम्रो SEO विशेषज्ञ को पहिचान गर्नुहुन्छ?
एक राम्रो SEO विशेषज्ञ सबै नयाँ चलनहरूको साथ राख्दछ।
कुनै पनि अन्य काम जस्तै, तपाईं पाउनुहुनेछ केही एसईओ विशेषज्ञहरु एक भन्दा धेरै तरीकामा अरु भन्दा राम्रो छन्। कुनै पनि अन्य टेक्नोलोजी जस्तै SEO परिवर्तन रहिरहन्छ। तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि गुगलमा कसरी खोज राखिएको थियो today बर्ष भन्दा पहिले आज गरेको खोज भन्दा फरक छ। प्रत्येक दिन, खोज इञ्जिनहरूले प्रयोगकर्ताहरू के चाहन्छन् भन्ने पहिचान गर्दछन्, र उनीहरूले ती खोजीहरूमा यस मापदण्डमा फिट हुन खोज परिणामहरू दर्जी गर्छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि जब तपाई गुगलमा कुनै खास कुञ्जी शब्द खोज्नुहुन्छ, तपाईलाई "प्रकार" का सूची प्रस्तुत गर्न सकिन्छ किनकि उनीहरूले महसुस गरे कि चीजहरू पहिले सूचीमा क्लिक गर्न सकिन्छ। अरूलाई हेर्नु अघि। तिनीहरूले यसमा तिनीहरूको एल्गोरिथ्म बनाए, राम्रो नतीजाहरू प्राप्त गर्नका लागि। एक राम्रो SEO विशेषज्ञ, तसर्थ, पहिचान गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ र हरेक नयाँ चलन संग रहन।
तपाईंको वेबसाइटमा अधिकतम यातायातको नयाँ तरिकाहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनुपर्दछ।
प्रत्येक वेबसाइट फरक छ, र केहि एसईओ रणनीतिहरू सबै वेबसाइटहरूको लागि काम गर्न सक्दछन्, राम्रो एसईओ विशेषज्ञले तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक अधिकतम बनाउन नयाँ तरिकाहरू पहिचान गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। तिनीहरू विश्लेषण गर्न र तपाईंको वेबसाइटको लागि अद्वितीय रूपमा फिट हुने तरिकाहरू फेला पार्न सक्षम हुनुपर्छ। अधिकतम ट्राफिकको मतलब भनेको उनीहरूको साइटमा आकर्षण गर्ने मानिस तपाईको विशेष ब्रान्डमा सान्दर्भिक छन्। उदाहरण को लागी, यदि यो एक व्यापार वेबसाइट हो भने, तपाइँको वेबसाइट को लागी खरीदारहरु लाई आकर्षित गर्नेछ जो तपाइँको उत्पादन र सेवाहरू खरीद गर्न तयार छन्।
प्रत्येक एसईओ रणनीति, यसको प्रासंगिकता र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्न सक्षम हुनुपर्दछ।
वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्दा त्यहाँ धेरै वस्तुहरू छन् जसमा तथ्याored्क हुनु आवश्यक छ। राम्रो एसईओ विशेषज्ञ उनीहरु लाई उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनु पर्छ र उनीहरुको प्रासंगिकता बुझ्न। यी कारकहरू समावेश:
लिंकहरू वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्दा अन्य वेबसाईटहरूमा लिंकहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एक राम्रो एसईओ विशेषज्ञहरु तिनीहरूको महत्व बुझ्न को लागी सक्षम हुनुपर्दछ र कहिले / कसरी तिनीहरुलाई प्रयोग गर्ने।
सामग्री मार्केटिंगको उपयोगको महत्त्व। यो एक महत्त्वपूर्ण मार्केटिंग उपकरण हो।
सामाजिक मिडिया को मान। सामाजिक मिडिया हालसालै धेरै लोकप्रिय भएको छ र यसैले SEO मा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
प्रति-क्लिक मार्केटिंग भुक्तान गर्नुहोस्। जबकि यो पुरानो एसईओ रणनीति हो, यो वेबसाइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्ने अत्यावश्यक विधि पनि हो।
भिडियो SEO। यो हालसालै विकसित रणनीति हो र धेरै उपयोगी छ। एक राम्रो विशेषज्ञ त्यस्ता नयाँ रणनीतिहरूको साथ राख्न सक्षम हुनु पर्छ।
SEO रणनीतिहरूको विकास जारी छ। जबकि कीवर्डहरू र मेटा ट्यागहरू जस्ता पुरानो युक्तिहरूले उपयोगी साबित भएका छन्, नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि यत्तिकै प्रभावकारी छन्, र एक राम्रो एसईओ विशेषज्ञ तिनीहरूलाई पहिचान गर्न र ठीकसँग प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।